नेपाल आज | राजपाका नेताहरू जनतालाई दुविधा र आफूलाई सुविधा हुने भाषा बोल्छन् (भिडियोसहित)
राजपाका नेताहरू जनतालाई दुविधा र आफूलाई सुविधा हुने भाषा बोल्छन् (भिडियोसहित)
आइतबार, ०८ पुष २०७५ गते प्रकाशित - नेपाल आज
डा. राजेश अहिराज, चोटिलो टिप्पणीका लागि चर्चित हुनुहुन्छ । तथ्यपरक विश्लेषणमार्फत अकाट्य तर्क प्रस्तुत गर्ने डा. अहिराजले यसपटक नेपालआजसँगको कुराकानीका क्रममा सरकारको धेरै आलोचना गर्नु भएको छैन । सरकारले लिएका केही कदम सुधारोन्मुख भएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले पूर्वराजा, कांग्रेस, मधेसवादी दलहरुबारे भने विशेष चिरफार गर्नुभएको छ । प्रस्तुत छ, उहाँसँग भएको कुराकानीको मुख्य मुख्य अंशहरुः
धेरैपछि स्थीर सरकार मुलुकले पाएको छ । तर स्थीर सरकारका तरंग अलि बढी नै लहरिरहेका छन् । कसरी विश्लेषण गरिरहनु भएको छ ?
जुन जेशमा राजा सन्तुष्ट र प्रशासक असन्तुष्ट हुन्छ त्यो देशको भलो कहिले हुँदैन । स्थीरता पनि हुँदैन । क्षणित स्थीरता देखिएला तर त्यो स्थायी हुँदैन ।
भनेपछि अहिलेका राजा भनेको त प्रधानमन्त्री नै हुन् । के प्रधानमन्त्री सन्तुष्ट भएर बस्नु भएको छ ?
परिणामले देखाउने कुराहरु हुन् । जनताको भान्छासम्म, जनताको घरआँगनसम्म, मजदुर, किसानको मनसम्म सुधार आएको छैन । दस्तावेजमा, कानुनमा, संविधानमा, अभिव्यक्तिमा, भाषणमा र गोष्ठीमा सुधार आयो तर जनजीवीकामा सुधार आएन । असमानहरुबीच समान प्रतिस्पर्धा गराइयो भने नतिजा पनि असमान नै आउँछ । कुनै पनि प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुने सीप, अवसर र क्षमतामै विभेद छ भने त्यसबाट समानता आउन सक्दैन ।
जति पनि देश समृद्ध छन्, के त्यहाँ शिक्षा र स्वास्थ्यमा समानता नै छ ? सबै एकै खाले विद्यालय र अस्पतालबाट सेवा लिन्छन् ?
जुन देशमा उच्च र तल्लो तहको निर्माण भएर पनि मानिसहरुले राम्रो सेवा सुविधा पाएका छन् त्यहाँका जनताको जीवनस्तर माथिल्लो हुन्छ । उनीहरु ३ महिना काम गरेर पनि वर्षभर बाँँच्ने आधार पाइरहेका हुन्छन् । विदेश भ्रमण गर्न सक्ने क्षमता आर्जन गरिरहेका हुन्छन् । तर नेपालमा १२ महिना काम गरेर १० महिना मात्रै खान पुग्ने अवस्था छ ।
हाम्रो जस्तो देशमा स्वास्थ्य र शिक्षा निःशुल्क हुनु पर्छ । हाम्रो सरकारले नुन, चामल, खसी, तेल बेच्छ तर स्वास्थ्य र शिक्षा व्यापारीको हातमा पुर्याइदिन्छ । लोककल्याणकारी मुलुकले निगरानी गर्नु पर्ने हो, आफैले व्यापार गर्ने होइन ।
सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोष स्थापना गरेर सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउने काम पनि थालेको छ । नराम्रो मात्रै छ र ?
यसअघिका नेपालका कानुन र संविधानले मधेसीलाई काम नदिनू, दलितलाई हेला गर्नू, जनजतीलाई अवसर नदिनू भनेका थिएनन् । विभेद लेखेर गरिँदैन । हामीकहाँको लगाईं भनेको नीतिगत होइन, नियतिगत हो । हामी अविकसित भएको होइन, अव्यवस्थित भएको हो । हाम्रा नेताहरु दल, गुट, टुक्रे समुदाय, जात तर परिवारका लागि चिन्तित छन् । देशका लागि चिन्तित छैनन् ।
नेपालमा गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा राष्ट्रिय पार्टीको अध्यक्ष हुँ भन्नेहरुको आफ्नै गाउँमा स्वास्थ्य, शिक्षा, सडक कुनै पनि क्षेत्र राम्रो छैन । नेपालमा जनताको लागि होइन जनताको नाममा राजनीति हुन्छ । राष्ट्रिय भनिएका दलहरुको विधानमा देशलाई खण्डीत गरिने गरी विधान नै तयार हुन्छन् । संविधानमा ‘नेपाली’ भन्ने मात्रै शब्द प्रयोग हुनु पथ्र्यो । तर जनजाती, खस, आदिवासी, मधेसी, मुस्लिम आदि आदि नाम प्रयोग भए । दलहरुका विधान त्यस्तै छन् जसले नेपाली–नेपालीबीच फाटो ल्याउने गरी जनताहरुको कित्ताकाट गरिदिए ।
यस्तो भनियो भने त हाम्रो पहिचान अस्वीकार गर्ने ? भन्दै मानिसहरु उफ्रि हाल्छन् । हैन ?
मान्छेले कसरी सोचेको हुन्छ, त्यसमा भर पर्छ । एक नेपाली भएर सोचिन्छ भने सोच्ने व्यक्ति नेपाली मात्रै हुन्छ । जातको धर्मको रुपमा आफूलाई उसले सोच्दछ भने ऊ त्यही जाती र धर्मको मात्रै हुन्छ । सोच्ने मानिसको स्तरले पनि यि कुराहरु निर्धारण गर्छन् । राष्ट्रिय नेताले क्षेत्रीय सोच राख्ने, जातीय व्यवहार र पारिवारिक आम्दानी गर्ने हुनहुँदैन । जस्तो चित्र हुन्छ, त्यस्तै चरित्र हुनु पर्छ । जस्तो पद छ त्यस्तै भूमिका हुनुपर्छ । जस्तो मन्तव्य छ त्यस्तै गन्तव्य हुनु पर्छ । नेताहरुको न धार, न धारणा न धरातल प्रष्ट छ ।
मलाई यो कुरा भन्दा लज्जाबोध हुन्छ कि नेताहरु गुटका लागि छलफलमा जुट्छन् । दलका लागि छलफल गर्छन र खुलेरै भन्छन् कि अब यो पार्टीलाई बलियो बनाउने हो । कसैले पनि यो देशलाई बलियो बनाउने हो भन्दैनन् । नेपालमा राष्ट्रवादीहरु धेरै भए । देशभक्त कम । राष्ट्रवाद र देशभक्ति फरक कुराहरु हुन् ।
सरकारको काम कारबाहीलाई कसरी मूल्यांकन गर्नु हुन्छ ?
यसअघिका सरकारहरुका कार्यशैली, बिचौलियाहरुको पहुँच, निजी लाभ, दबाब, भ्रष्टाचार हेर्दा वर्तमान सरकार सफा छ । तर यो सरकारले बोले जति कुरा जनताको आँगनसम्म पुगेको छैन ।
गाउँगाउँमा सिंहदरबार भनियो, सिंहदरबार आयो आएन थाहा भएन तर गाउँगाउँमा राजारानी भने पुगे भन्न थालिएको छ । के भन्नु हुन्छ ?
जनताको यो गुनासो सहि हो । किनभने जनताले स्वराजको अनुभव गर्न सकेको छैन । जनताले मागेको भन्दा बिल्कुल फरक नेताज्युहरुले दिनु भएको छ । नेपालका कुनै पनि भूगोलका कुनै पनि जनताले धर्मनिरपेक्ष बनाउ भनेका थिएनन् । यस्तो भताभुंगे संघीयता लागू गर पनि भनेका थिएनन् । जुन नेता र दलहरुले राजसंस्था हटाए, धर्मनिरपेक्षता लादे, जसले संघीयता लादे उनीहरुले चुनावको बेला यस्तो परिवर्तन गर्छौं भनेकै थिएनन् । सुन दिन्छु भनेका थिए लसुन दिए । नेताहरु लिडर होइन डिलर भए ।
विगतका सरकारसँग तुलना गर्दा वर्तमान सरकार सफा भन्नु भयो । तर विवादमा पनि उत्तिकै फसकेको छ नी सरकार ?
फोहोर धेरै छ । फोहोर सफा गर्नेलाई अलिअलि दाग त लागिहाल्छ । यति धेरै बौद्धिक लठैत छन् कि जति राम्रो गर्न खोजे पनि केही मानिसहरु विरोधमै बोल्छन् । कतिपय नेताहरु नियतबस पनि सरकार बदनाम गराउन लागेका छन् । उदाहरणका लागि एक वरिष्ठ अधिवक्ता भइसकेको मान्छेले यहि संविधानको विरोध गर्यो । पछि त्यही संविधानअन्तर्गतको संसदीय व्यवस्थाको एक समितिको अध्यक्ष भयो । उसले त्यसपछि ड्राइभरको तलब पनि आफैंले खायो । काठमाडौंमै घर भएर पनि घरभाडा बुझ्यो । के उसलाई कानुन र विधिको ज्ञान थिएन होला ? मधेसका राम्रा नेताहरुले पनि सरकारको १२ हजार खाइदिएर पनि सरकारको बदनाम गरिदिएका छन् ।
वर्तमान सरकारले सुधारका प्रयास गरेको छ । पहिलेजस्तो पैसा दिएर सरुवा हुँदैन, पैसा दिएर प्रहरीमा जागिर पाइँदैन, बिचौलियाहरुले सरुवा, बढुवाका लागि क्रियाशील भएको अवस्था पनि छैन । यो सरकारले बोलेका जति काम गर्न सकेको छैन ।
टेलिकममा चार महिनादेखि प्रबन्ध निर्देशक नियुक्त हुन सकेको छैन । सरकार आफै सूचना लुकाउँछ । अनि तपाई भन्दै हुनुहुन्छ कि सरकार सुधार गरिरहेको छ ।
विवादास्पद व्यक्तिलाई नियुक्ति दिएको भनेर मात्रै हुँदैन । प्रमाण पनि ल्याउनु पर्छ । कसैको थर ठिक लागेन, कसैको अुनहार मन परेन वा त्यो व्यक्तिले आफूले भनेको मानेन भनेर पनि विरोध हुने गरेको छ । अहिलेको सरकारले जे जे निर्णय गर्दै गएको छ त्यसलाई लागू गर्नबाट चुकिरहेको छ ।
सञ्चारमन्त्रीले पत्रकारलाई कि धम्की दिनुहुन्छ कि उपदेश । प्रधानमन्त्रीले बुद्धिजीवीलाई थला नै पारिदिन्छु भन्नु भएको छ । के लाग्छ ?
सञ्चारमन्त्री र प्रधानमन्त्री दुवैले बोलेर होइन काम गरेर सबै प्रश्नहरुको व्यवहारिक जवाफ दिनु पर्छ । बोल्न कम गर्नु पर्छ । जति पनि मानिसहरुले प्रश्न गर्छन्, त्यसको जवाफमा शब्दमा होइन, कामले दिनु पर्छ । बोल्ने काम प्रवक्ता, आलोचक, प्रतिपक्षलाई दिनु पर्छ ।
इन्धन, घरभाडा, पिएको पैसा पनि नेताहरुले खाए भन्ने कुरालाई कसरी बुझ्नुहुन्छ ?
जसले पिए नै नियुक्त गरेको छैन, उसलाई पनि पिएको पैसा निकासा गर्ने सरकारी कर्मचारी कस्ता हुन् ? जसले आफ्नो सम्पत्ति विवरणमा काठमाडौंमा घर छ भनेर स्पष्ट लेखेको छ, उसैलाई घरभाडा हालिदिने कर्मचारी कस्तो हुन् ? नेता मात्रै होइनन्, संरचना पनि दोषी देखिएको छ । नेता हुँदैमा सबै कानुनको ज्ञाता हुँदैनन् ।
हालै प्रचण्डले पूर्वराजालाई भन्नु भयो कि ‘होटल होटल नाच्दै हिँड्ने होइन ।’ तर उहाँ आफै पनि रेखा थापासँग नाच्नु भएको थियो । कसरी हेर्नुहुन्छ ?
प्रधानमन्त्री भइसकेको व्यक्तिले यस्तो कुरामा कमेन्ट नगरेको राम्रो हो । प्रचण्डको अभिव्यक्ति उहाँको पदीय गरिमाको विरुद्ध हो । व्यक्तिगत र पारिवारिक कुराहरुमा अभिव्यक्ति नदिएको राम्रो हो । नेपालका प्रथम गणतन्त्रवादी व्यक्ति ज्ञानेन्द्र नै हुन् । जसले कुनै पनि नागरिकको हत्या नगरी आफ्नो सर्वस्व सुम्पेर हिँडे । १७ हजार मान्छे मारेर माओवादी स्थापित भए । सयौं मान्छे मारेर उपेन्द्र यादव स्थापित भए । कांग्रेस कम्युनिष्ट सबैको पृष्ठभूमि जनता मार्ने नै छ । तर पूर्वराजाले जनता मार्नुभन्दा गद्दि नै छाडिदिए । यसले उनमा नागरिक तहमा भएको प्रेम देखाउँछ । जनताले यो कुरा बुझ्दै गएका छन् ।
प्रशंग बदलौं, कांग्रेस हिन्दुत्वको मुद्दामा फर्किएला ?
फर्किए कांग्रेसको हितमा हुनेछ । कांग्रेसको एकमात्रै आधार क्षेत्र मधेसमा बाँकी छ । मधेसमा अधिकांश मानिसहरु हिन्दु छन् । हिन्दुको कुरा गर्नुको अर्थ इसाईको विरोध गर्नु होइन । अरु धर्मको अपमान गर्नु पनि होइन । तर राप्रपा जस्तो पनि गर्नु हुँदैन । राप्रपाले हिन्दुत्वलाई ‘ताक परे तिवारी नत्र गोतामे’का रुपमा प्रयोग गरेको हो । त्यसरी चाहिँ कांग्रेसले गर्नु हुँदैन ।
प्रचण्डले भन्नु भयो कि कांग्रेसले हिन्दुत्व बोक्यो भने त्यो पार्टी समाप्त हुन्छ । धर्मनिरपेक्षता बोकेको उहाँकै माओवादी पार्टी एमालेमा मिसिएर समाप्त भयो नी ?
प्रचण्डको अभिव्यक्ति विचलनको संकेत हो ।
संघीय समाजवादी र राजपाबीच किन एकता हुँदैन ?
केन्द्रमा मधेसका मुद्दा भइदिएको भए क्षेत्रीय दल बन्ने नै थिएनन् । जति पनि छन् आफूलाई मधेसवादी भन्नेहरु यिनीहरु मधेसको नेतृत्व गर्दैनन्, प्रतिनिधित्व मात्रै गर्छन् । यिनीहरु अवसरवादी राजनीतिक बिचौलिया मात्रै हुन् । यिनीहरुबाट न मधेसको न देशको कसैको हित हुँदैन ।
राजपाबाट महन्थ ठाकुरलाई किन ‘कू’ गरियो ?
दुई दुई महिनाको चक्रीय प्रणालीको कुरा विधानमा राखेपछि ठाकुर आफैले आफ्नो पद छाड्नु पथ्र्यो । मान्नु भएन ।
दीपक बोहोरालाई संघीय समाजवादीमा भित्र्याउने तयारी भइरहेको बुझिन्छ । कोही नपाएर फोरमले दीपक बोहोरालाई किन भित्र्याउने होला ? जबकी दीपक बोहोरालाई वनमारा भन्ने गरिन्छ ।
दीपक बोहोरा वनमारा भएर के भयो त ? उपेन्द्र यादव त ज्यानमारा नै हुन् । ज्यानमाराले वनमारालाई भित्र्याउँछ भने के अनौठो मान्नु ? गौर घटनामा कति मधेसी मारिए ? कपिलवस्तु, लाहान, तिलाठीमा कति मारिए ? मधेसमा गैर न्यायिक २८१ मानिस मारिए । मधेसमा भएका ३ आन्दोलनमा ११७ जना मधेसी मारिए । यति धेरै मधेसी मारेर बल्लतल्ल स्वास्थ्यमन्त्री भएका मानिसले दीपक बोहोरालाई भित्र्याउनु अनौठो होइन । दीपक बोहोरा र उपेन्द्र यादवको कलेज एउटै हो, विषय फरक जस्तै हो ।